Ọzọkwa, mgbasa ozi ga-agba ọsọ na ibe azụmahịa nke ndị asọmpi:
Onwe m, echere m na nke a dị aghụghọ. Eserese a na-egosi na ọnụọgụ ọchụchọ dị mkpa maka saịtị ahụ n'onwe ha… ọ bụghị ọchụchọ maka okwu dịka azụmaahịa Monique ga-achọ. Ọ bụrụ na ị na-eme na search (“ịhịa aka n'ahụ Indianapolis”), nsonaazụ ọchụchọ dị nnọọ iche - na Ndepụta Angie a na-egosipụta ya n’elu Yelp na Yellow Pages na nsonaazụ azụmaahịa Google na-achị peeji a:
N'ikpeazụ, anyị nwetara ọnụahịa maka mgbasa ozi Yelp. Ọnụ ego adịghị akwụ ụgwọ, ọbụnakwa gụnyere vidiyo ọdịnala nke Yelp gaara ewepụtara ya na onye ahịa ahụ. Onye nnọchiteanya ahụ gwara anyị na mgbe enwere vidiyo, enwere ntụgharị 7% ka elu. Na esemokwu na ịnye ọnụahịa bụ na ọ chọrọ nkwekọrịta kwa afọ. Ọ bụrụ na Monique anaghị enweta nsonaazụ, ntaramahụhụ maka ịpụ n'oge bụ ọnwa 2 nke ịkwụ ụgwọ na mgbakwunye na vidiyo nke vidiyo. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga-efu Monique otu puku dollar ma ọ bụrụ na mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ.
Anyị kwadoro Monique ọ bụghị gaa n'ihu na mgbasa ozi… ọ bụghị n'ihi na anyị chere na mgbasa ozi Yelp agaghị arụ ọrụ, mana n'ihi ihe achọrọ maka ntinye aka kwa afọ. Otu ụbọchị iri atọ ga-amagbu onwe ya ma ọ bụrụ na ọnụọgụ mgbanwe ga-eme ka Monique zụọ ahịa ọhụrụ iji mejuo kalenda ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ọ bụghị, nkwekọrịta kwa afọ achọrọ nwere ike imebi azụmahịa ọhụrụ ya - mgbe ọ kacha chọọ inweta ego.